यस कारण आसन्न भारतीय चुनावमा मोदीको जीत चाहन्छ पाकिस्तानी सेना – Everest Dainik – News from Nepal
यस कारण आसन्न भारतीय चुनावमा मोदीको जीत चाहन्छ पाकिस्तानी सेना
काठमाडौँ । पारम्परिक प्रतिद्वन्दी भारत र पाकिस्तान एक पटक फेरि आमुन्ने सामुन्ने छन् र विश्व समुदाय यी दुईबीच युद्धको घोषणा नहोस भनेर सजग छ । भारतले पाकिस्तानी सीमाभित्र हवाई कारवाही गरेको भोलिपल्ट नै पाकिस्तानले पनि भारतीय सीमाभित्र छ ठाउँमा बम खसालेको दाबी गरेको छ ।
दुबै देशका मिडियामा परस्पर विरोधाभाषी दाबीहरू गरिँदै आएका छन् । एकातिर पाकिस्तानले आफूहरूले पाक सीमाभित्र पसेका भारतका दुई वटा युद्धक विमान खसालिदिएको र दुई जना पाइलटलाई समेत हिरासतमा लिएको दाबी गरेको छ भने भारतले आफूले पाकिस्तानको एउटा एफ-सिक्सटीन विमान ध्वस्त पारेको दाबी गरेको छ ।
दुबै देशका यस्ता दाबीहरू आइरहँदा विश्व समुदायले दुबैलाई अत्यधिक संयम राख्न आग्रह गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन- सार्कको अध्यक्षको हैसियतले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि अत्यधिक संयमको आग्रह गरिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ- के भारत र पाकिस्तान युद्धको अनिवार्य स्थितिमा पुगेकै हुन् त? या के युद्ध अहिलेको आवश्यकता हो?
पाकिस्तानले भारतमाथि असन्न लोकसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर मोदी सरकारले गरेको चुनावी स्टन्ट भनेको समेत आरोप लगाएको छ । भारतमा समेत मोदीका समर्थकहरूले सामाजिक संजालमा ‘मोदीले अक्टोबरको नतिजा फेबुअरीमै ल्याएको’ भन्दै उनको प्रशंसा गरिरहेका छन् ।
यस्तोमा एउटा प्रश्न उठ्छ- भारत-पाकिस्तानबीच तनाव बढेपछि भारतमा मोदीको पक्षमा जनमत बढ्ने थाहा पाउँदापाउँदै पकिस्तान किन भारतलाई यस्तो समयमा चिढ्याउन चाहन्छ त? के पाकिस्तान अझै पाँच वर्ष मोदी नेतृत्वको बलियो र कट्टर भारत चाहन्छ त?
यदि यी प्रश्नको उत्तर ‘हो’मा आयो भने अचम्म मान्नु पर्दैन ।
दक्षिण एशियाको सुरक्षा मामिला विशेषज्ञ प्राध्यापक क्रिस्टिन फेयरको धारणा अनुसार भारत-पाकिस्तानबीच तनावपूर्ण सम्बन्ध र बलियो भारतको उपस्थिति नै अहिलेको अवस्थामा पाकिस्तानी सेनाको चाहना हो ।
बिबिसीका संवाददाता दिलनवाज पासासँगको कुराकानीमा फेयर भन्छन् पुलवामा आक्रमणको सम्बन्ध कुनै न कुनै रूपमा आसन्न भारतीय निर्वाचनसँग छ र यो निकै सोचविचार गरेर चालिएको कदम जस्तै लाग्छ ।
निर्वाचनसँग आक्रमणको सम्बन्ध
यो मामिलाको सम्बन्ध भारतमा हुन लागेको निर्वाचनसँग रहेको प्राध्यापक फेयर मान्छन् । उनका अनुसार भारतमा भएका आक्रमणको व्याख्या गर्न सकिन्न । तर पुलवामा आक्रमणबाट थाहा हुन्छ कि आक्रमण निकै सोचविचार गरेर गरिएको छ ।
आक्रमणमा सैन्य बललाई तारो बनाइएको छ । यो निकै भड्काउने खालको आक्रमण हो। किनकि भारतीयहरू आफ्नो सेनाको विषयमा निकै भावुक छन् ।
यो अमेरिकीभन्दा उल्टो हो । अमेरिकामा सर्वसाधारण मारिँदा जनता भड्किन्छन् । त्यसको उल्टो भारतमा सैनिक मारिँदा जनता भड्किन्छन् ।
आक्रमणमा निशाना बनाइएको अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ भारतमा सबैभन्दा कम बजेट भएका सुरक्षा अङ्गमध्ये एक हो। उक्त आक्रमण निकै विभत्स थियो ।
जैश-ए-मोहम्मदले सन् २००० पछि कुनै आत्मघाती घटना गराएको थिएन । उन्नाइस वर्षपछि गरायो र त्यसको उद्देश्य नै भावना भड्काउनु थियो ।
प्राध्यापक फेयर भन्छन्, “आक्रमणको समय पनि निकै सोचविचार गरेर छानिएको छ । त्यसैले यत्रो ठूलो प्रतिक्रिया देखिएको हो ।”
उनको मतमा भारतका मानिसले सुन्न नचाहे पनि वास्तविकता यो हो कि भारतको निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदीको जितबाट सबैभन्दा बढी लाभ पाकिस्तानको खास सत्तालाई हुन्छ ।
यसको कारण के हो भने पाकिस्तानमा यसबेला विद्यमान कैयौँ घरेलु दबावहरू रहेको उनको भनाइ छ । “सबैभन्दा ठूलो समस्या पश्तुन आन्दोलन हो जो त्यहाँको अखण्डताका लागि ठूलो खतरा हो ।” फेयर भन्छन्, “बलुचिस्तानमा भइरहेको सङ्घर्ष पनि त्यहाँको निम्ति खतरा हो । एउटा बलियो भारतबाट हुने खतराले पाकिस्तानलाई आन्तरिक रूपमा एकजुट बनाउँछ ।”
यदि पाकिस्तानको तर्फबाट हेर्ने हो भने केही चरमपन्थी मारिनुले उसको रणनीतिक मुद्दालाई प्रभावित तुल्याउँदैन । तर भारतमा मोदीको जित सुनिश्चित बनाउन आक्रमण गर्नु पाकिस्तानको खास सत्ताको रणनीतिक आवश्यकतासँग अवश्य पनि मेल खान्छ फेयरको मत रहेको छ ।
पाकिस्तानलाई के फाइदा?
प्राध्यापक फेयरका अनुसार पाकिस्तानीहरूमा कांग्रेसको जितले हिन्दू अन्धराष्ट्रवादी भारतको डर त्यति उत्पन्न गर्न सक्दैन जति भाजपाको जितले गर्छ ।
त्यसैले आक्रमणको समय र शैलीले फेयरकै शब्दमा “भारतीय निर्वाचनमा मोदीको जित सुनिश्चित गराउने उद्देश्य भएको” सङ्केत गर्छन् ।उनी भन्छन्, “यसअघि भारतीय निर्वाचनमा मोदीको जित सुनिश्चित थिएन ।”
फेयरको मतमा अब जे अवस्था छ, अब मोदीले जित्ने लगभग निश्चित छ र पाकिस्तानी गुप्तचर संयन्त्र यही चाहन्छ । किनकि एउटा बलियो भारत, जोसँग पाकिस्तान डराओस्, त्यसले पाकिस्तानीलाई जतिसुकै अलोकप्रिय काम गरे पनि पाकिस्तानी सेनाको पछाडि उभ्याइदिन्छ ।
तर उनी ‘पाकिस्तानको खास सत्तालाई मोदीको जितले फाइदा पुग्छ’ भन्ने तर्कको अर्थ आक्रमणसँग मोदीको कुनै सम्बन्ध छ भन्ने पनि होइनभन्ने पनि भारतीयहरूले बुझ्नुपर्ने ठान्दछन् ।
उनी भन्छन्, “तर मोदीको जित पाकिस्तानी सेनाको आवश्यकता हो । किनकि यसबाट उसले पश्तुन र बलुचमाथि गरिरहेको अत्याचार लुकाउन सक्छ ।”
सैन्य क्षमता उन्निस-बीस मात्र
प्राध्यापक फेयरका अनुसार यदि आँकडाहरू हेर्ने हो भने भारत सैन्य शक्तिको दृष्टिले पाकिस्तानभन्दा निकै माथि देखिन्छ । उनी भन्छन्, “सैन्य जनशक्ति देखेर क्षमता फरक लाग्नु स्वाभाविक पनि हो तर जब दुवै देशका सैनिक नियन्त्रणरेखा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमानजिक तैनाथ हुन्छन् तिनको क्षमता धेरै हदसम्म बराबर नै हुन्छ ।”
फेयरलाई लग्ग्छ एउटा लामो युद्धको स्थितिमा भारतले आफ्नो सेनाको पूरै क्षमता लगाउन सक्छ । उसले अलगअलग ठाउँमा तैनाथ सेनालाई सीमामा ल्याउन सक्छ ।
उनी भन्छन्, “मलाई लाग्छ धेरैजसो अमेरिकी विश्लेषकहरूले पनि यही ढङ्गले सोच्ने गर्छन् कि एउटा छोटो युद्धमा भारत वा पाकिस्तान कसैसँग पनि निर्णायक जितको निम्ति क्षमता छैन ।”
फेयरलाई लाग्छ यी दुई देशबीच युद्ध भयो भने पनि त्यो छोटो हुनेछ किनकि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले परमाणुशक्ति भएका यी दुवै देशबीच लामो युद्ध हुने दिने छैनन् ।
ट्याग्स: india pakistan tension, narendra Modi